Rastrabani.com | तीस वर्षदेखि जंगलको बास ? - Rastrabani.com तीस वर्षदेखि जंगलको बास ? - Rastrabani.com
तीस वर्षदेखि जंगलको बास ?
लमाहा । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–६ लमाहाको जंगलमा १४ घरधुरीको सानो बस्ती छ । घरमा प्रायस् युवा भेटिंदैनन् । उनीहरू काठमाडौंका चिम्नी उद्योगमा काम गर्छन् । महिला र वृद्धवृद्धा घर कुरुवाका रूपमा बसेका छन् । ३० वर्ष पुरानो यही बस्तीमा शनिबार झोक्राइरहेको अवस्थामा भेटिइन्, ४० वर्षीया फूलमाया पहरी ।
२०४४ मा मकवानपुरको डाङडुंगे गाउँबाट बस्ती हटाइएपछि उनको परिवार जंगलमा झुपडी बनाएर बसेको हो । ‘हुने खानेलाई सरकारले जमिन दिएर राख्यो,’ उनले भनिन्, ‘हामी गरिबलाई कसले के दिन्छ र ? पक्षमा बोली दिने कोही नभएपछि जंगलको बास भयो ।’
त्यसबेला हारगुहार गर्दा पनि जमिन नदिएको उनको गुनासो छ । उनका २ छोरा काठमाडौंमा पेन्टरको काम गर्छन् । १४ वर्षीया छोरी पनि चिम्नी भट्टामा काम गर्न उतै गएकी छन् । श्रीमान् दिलबहादुरको ६ वर्षअघि पत्थरीले मृत्यु भएपछि परिवारमा आर्थिक संकट झनै चुलिएको छ ।
उनको मात्र होइन, बस्तीका अधिकांशको आर्थिक अवस्था दयनीय छ । सबै घरका पुरुष चिम्नी उद्योगमा काम गर्न गएका छन् । जंगल बीचमा बस्ती भएकाले विद्यालय छैन ।
बस्तीका झन्डै ५० बालबालिका अध्ययनबाट वञ्चित छन् । १४ वर्ष उमेरमाथिका बालबालिका चिम्नीमा काम गर्न जाने चलन छ । कलिला बालबालिका भने घरमै खेलेर बस्छन् ।
विद्यालय र बजार जान जंगल छिचोलेर ७ किमिपूर्व चन्द्रनिगाहपुर र १२ किमि पश्चिम निजगढ पुग्नुपर्छ । तत्कालीन वनमन्त्री हेमबहादुर मल्लको पालामा पहाडको बस्ती यहाँस्थित कटानी गाउँमा सारिएको थियो ।
त्यसबेला हुने खानेले मात्र घरघडेरी पाएको उनीहरूको गुनासो छ । नगरपालिका भए पनि बस्तीमा खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षालगायत आधारभूत सुविधा पुगेको छैन ।
स्थानीय बस्तीछेउको लमाहा खोलाको धमिलो पानी पिउन बाध्य छन् । ‘घरमा खानलाई धौ–धौ छ, छोरारछोरी कसरी पढाउनु,’ बस्तीकै माया पुलामीले भनिन्, ‘पढ्ने उमेरमा काम गर्नुपर्छ । पढ्ने र पढाउने कुरै नगर्नुस् ।’ यी सुकुम्बासीसँग कमाइ गरेर खाने एक टुक्रा जग्गा छैन ।
वन्यजन्तुको त्रास पनि उत्तिकै छ । कहिलेकाहीं बाख्राको खोजीमा बाघ झपडीमै आइपुग्छ । छेउबाटै जंगली हात्तीको लस्कर ओहोरदोहोर गर्छ । सधैं त्रासको जिन्दगी जिउनुपर्ने मायाले बताइन् ।
रौतहटमा विपन्न समुदायका यस्ता बस्ती धेरै छन्, चुनावका बेला नेताहरू आश्वासन दिन्छन् । भोट पाएर जितेपछि फर्केर हेर्दैनन् । त्यसैले उनीहरूले आश्वासन पत्याउन छाडिसकेका छन् । ‘घर बनाइदिन्छौं, धारा गाडिदिन्छौं भन्दै पहिला पनि भोट मागे । पछि फर्किएरै आएनन्,’ फूलमायाले आक्रोश पोखिन्, ‘अब त आसमात्रै देखाउन हामी कहाँ नआए हुन्छ ।’ अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
चन्द्रपुर नगरप्रमुख रामचन्द्र चौधरीले लमाहाको बस्तीलाई अन्यत्र सार्नका लागि कुनै योजना नभएको बताए । ‘यस विषयमा छलफल गरौंला,’ उनले भने, ‘स्थानीयको समस्या के छ त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा दलहरूबीच छलफल जरुरी छ ।’